SAWIRRO: Kooxda Elman oo soo bandhigtay saxiixeeda cusub ee Issah Ibrahim… (Lambarkee ayuu u xiran doonaa?) – Gool FM
SAWIRRO: Kooxda Elman oo soo bandhigtay saxiixeeda cusub ee Issah Ibrahim… (Lambarkee ayuu u xiran doonaa?)
Haaruun March 1, 2020
(Muqdisho) 01 Mar 2020. Kooxda kubadda cagta Elman ayaa soo bandhigtay saxiixeeda cusub ee Issah Ibrahim, kaasoo heshiis labo sano ah qalin ugu duugay naadiga faca weyn ee Jaalayaasha.
Suuqa kala iibsiga horyaalka Somali Premier League ayaa daaha laga rogay, iyadoo kooxaha horyaalka ay baadi goob ugu jiraan inay keensadaan xiddigo ku filan kooxdooda, maadaama dhowaan uu furmi doono wajiga labaad ee horyaalka Soomaaliya.
Naadiga Elman ayaa la soo wareegtay xiddiga lagu magacaabo Issah Ibrahim, kaasoo u dhashay dalka Ghana, waxayna kala soo saxiixdeen kooxda STK Stars taas oo ka dhisan dalkiisa hooyo.
Waxa ay ku soo bandhigeen xaruntooda ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho, waxaan heshiiska ka saxiixay xoghayaha kooxda Elman ee Moha.
Issah Ibrahim ayaa ah xiddig weerarka ka ciyaara, wuxuuna dagaal adag la gali doona xiddigaha kala ah; Anwar Shakunda iyo Jamaal kuwaasoo iminka weerarka ugu ciyaara kooxda Jaalayaasha ee Elman.
Laacibka u dhashay dalka Ghana ayaa la gudoonsiiyay lambarka 25-aad oo uu xiran doono kooxdiisa cusub ee Elman, kaasoo kaga soo muuqan doono markiisa ugu horreysa wajiga labaad ee horyaalka Somali Premier League.
Si kastaba ha noqotee, kooxda Elman ayaa ku jirta booska labaad ee kala sarreynta horyaalka Somali Premier League, iyadoo leh 18-dhibcood, waxaana hoggaanka looga hayaa 2-dhibcood oo qura.
Dhallinyarada reer Muqdisho oo siyaabo kala duwan uga hadlay kulanka caawa u dhexeeya Real Madrid iyo Barcelona ee El Clasico
Maxay ka yiraahdeen xiddigaha Liverpool guuldarradii xalay ka soo gaartay Kooxda Watford?